လက်ကားအပြင်ဘက်အကျီထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | ။
1. အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ 1. Contrast အရောင်ဒီဇိုင်းကိုမွေးစားသည်။ အစိုင်အခဲအရောင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်ပြောင်းလဲမှုသည်ပြင်ပဖက်ရှင်လမ်းကြောင်းကိုဖြန့်ဖြူးနိုင်သည်။
(၂) ကုတ်အင်္ကျီကိုကြာပန်းအရွက်များဖြင့်ပြုလုပ်သောရေစုဆောင်းသည့်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီးမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့လှိမ့်ထွက်သွားသဖြင့်မိုးရာသီနှင့်နှင်းဖုံးနေသောရာသီဥတုကိုအလွယ်တကူစိန်ခေါ်နိုင်သည်။ ပြင်ပအားကစား ၀ တ်စုံများနှင့်အ ၀ တ်အထည်များအတွက်ကျောကော်လာရုပ်ရှင်နည်းပညာနှင့်သင့်တော်သောလေကာ၊ ရေစိုခံ၊ ခြစ်ရာ၊
၃။ ရှေ့ခတ်နှင့်အိတ်ကပ်၏ရေစိုခံဇစ်ထိုး၊ အိတ်ကပ်၏ပါးစပ်တွင်ကော်ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုခြင်း၊ ရောင်ပြန်ဟပ်သောဇင့်အိတ်ဘေးတွင်ပုံနှိပ်ထားသောညသည်ညအချိန်တွင်သွားလာရန် ပို၍ လုံခြုံစေသည်။ Velcro ကို cuff တွင် အသုံးပြု၍ တင်းကျပ်စွာအလွယ်တကူထိန်းညှိနိုင်ပြီးအအေးမိလေထုတိုက်ခိုက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
(၅) ပါးပျဉ်းကိုဖယ်ရှား။ ၊ ဇစ်ပါ်ကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်ကော်လာတွင်ကောင်းမွန်သောလက်ရာမြောက်မှုနှင့်လိုင်းသဲလွန်စကိုပင်ဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်။ ရင်ဘတ်ကိုပုံနှိပ်၊ ဖက်ရှင်၊ ရိုးရှင်းပြီးလှပသောပုံနှိပ်နိုင်ပြီးအပန်းဖြေအားကစားအတွက်ဝတ်ဆင်နိုင်သည်။
၆။ တင့်ကားသည်နှစ်ဖက်စလုံးမှဖယ်ရှားထားသောအခွံမာသော၊ နူးညံ့။ ပျော့ပျောင်းသည်။ သိုးမွေးသည်မကျဆင်းပါ။
၀ တ်စားဆင်ယင်မှုသုံးခု (ဂျာကင်အင်္ကျီတစ်ထည်တည်း ၀ တ်ဆင် + တောက်ပမှုတစ်ခုတည်းဝတ်မှု + ကှနျ့နှင့်ကုတ်အင်္ကျီပေါင်းစပ်)၊ ဆောင်း ဦး ရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီပျင်းရိငြီးငွေ့ခြင်း၊ ပြောင်းလဲနိုင်သောသွားလာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရန်လွယ်ကူသည်။
၈။ ထုတ်ကုန်အနည်းဆုံးမှာယူမည့်ပမာဏမှာ ၅၀၀ ဖြစ်ပြီးစိတ်ကြိုက်ပုံစံ၊ အရောင်နှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းများကိုထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအပိုင်းအစတစ်ခုစီပွင့်လင်းပလပ်စတစ်အိတ်နှင့်ထုပ်ပိုးထားသည်။
ဤထုတ်ကုန်သည်ပြင်ပအားကစား၊ တောင်တက်၊ နှင်းလျှောစီး၊ ကုမ္ပဏီအုပ်စုဆောက်လုပ်ရေးခရီးနှင့်အခြားဝတ်ဆင်ရန်အတွက်သင့်တော်သည်။ အပြင်ပန်းအားကစားနှင့်အပန်းဖြေမှုနှစ်မျိုးလုံးအတွက်၎င်းကို ၀ တ်ဆင်ပါ။
ရှေ့သို့ OEM ထောက်ပံ့ရေးလဲမှို့ဗုံးကြဲဂျာကင်အင်္ကျီ - အပြင်ဘက်ဂျာကင်အင်္ကျီ -t - qiangwei